Goorta uu sida rasmiga ugu soo biiri doono Pogba kooxda Man Untd oo la shaaciyey » Laacib.so | Horyaalka Ciyaaraha Dalka iyo Caalamka
Home/ England/Goorta uu sida rasmiga ugu soo biiri doono Pogba kooxda Man Untd oo la shaaciyey
Goorta uu sida rasmiga ugu soo biiri doono Pogba kooxda Man Untd oo la shaaciyey
Mohamed Haji July 16, 2016
Laacib.so Jariirada caanka ah The Sun ayaa shaaca ka qaaday in wadahadalada ay Manchester United kula jirto Juventus iyo wakiilka Pogba, Mino Raiola in la filayo in la dhameystiro maanta ama berri oo axad ah.
Manchester United aya qarka u saaran inay heshiis ka gaarto dalabkooda rikoorka adduun noqonaya ee 105ta milyan ginni ee ay ku doonayaan Paul Pogba, sida ay saaka qortay jariirada Ingariiska ee The Sun.
Xiddiga khadka dhexe oo 23 sanno jir ah ayaa saxiixi doona heshiis shan sanno ah oo uu isbuucii ku qaadanayo 202 kun ginni marka uu ka soo laabto fasaxa uu ku joogo Mareykanka sida ay qortay The Sun.
Raiola ayaa maalmihii ugu danbeeyay wadahadalo kula jiray madaxda Man United oo ku aadan heshiiska shaqsiga ah ee xiddiga France, waxaana saxiixa xiddigaan uu jabinayaa rikoorkii 86da milyan ginni ee ay Real Madrid kula wareegtay Gareth Bale sannadii 2013.
The Sun ayaa sheegeysa in Pogba laga yaabo inuu u soo safro Manchester sida ugu dhakhsiyaha badan maalinta talaadada si uu u maro tijaabada caafimaadka.
Wadahalada ayaa waxaa adkeeyay xaqiiqda ah in Raiola uu heshiis kula jiro Juventus oo ah inuu qaadan doono boqolkiiba 25 lacagta lagu iibiyo Pogba.
Warka ay qortay The Sun ayaa ka horimaanaya hadalkii uu saxaafada Talyaaniga u sheegay maamulaha guud ee Juventus Guiseppe Marotta kaasoo xusay inuusan jirin xiriir dhexmaray Manchester United iyo Juventus oo ku aadan Paul Pogba.
SAWIRRO: Kulankii shalay ee tartanka Gobolada Soomaaliya,,,(Gobolka Banaadir oo guul ku furtay)
Yaa noqon karaa xidiga garoonka samuel eto'o oo ka hadlay ciyaarta caawa